Hamro Yatra | » चितवन घटनामा भीमबहादुर विककी श्रीमतीको दुखेसो- गाली गर्दैमा मर्ने गरी कुट्नुपर्थ्यो र? चितवन घटनामा भीमबहादुर विककी श्रीमतीको दुखेसो- गाली गर्दैमा मर्ने गरी कुट्नुपर्थ्यो र? – Hamro Yatra
> चितवन घटनामा भीमबहादुर विककी श्रीमतीको दुखेसो- गाली गर्दैमा मर्ने गरी कुट्नुपर्थ्यो र?
चितवन, कात्तिक १ । भरतपुरमा कुटिएर मृत्यु भएका भीमबहादुर विकको परिवारले दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। भरतपुरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मृतकका परिवारले ‘मन्दिरमा बोकाको बलि चढाउन पाउनुपर्ने विषय उठाउँदा गैरदलितको आक्रमणबाट दलितको मृत्यु भएको’ दाबी गरेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता डिएसपी सूर्यबहादुर थापाका अनुसार गत बिहीबार दसैंको नवमीका दिन बिहान भरतपुर महानगरपालिका–४ स्थित दुर्गा मन्दिरनजिकै ५८ वर्षीय विकमाथि स्थानीय सीताराम बस्नेत र दिलीप श्रेष्ठले कुटपिट गरेका थिए। यो मन्दिर नारायणगढको सहिदचोकदेखि करिब पाँच किलोमिटर पश्चिममा छ। भीमबहादुरको घर उक्त मन्दिरबाट करिब तीन सय मिटर दक्षिण पर्छ।
‘हामी दलितहरूले दुर्गा मन्दिरमा बोकाको बलि दिन पाउने कि नपाउने भनेर भन्दा मन्दिरनजिकै घर भएका सीतारामले नहुँदो कुरा बढी बोल्छस् भन्दै गालीगलौज गरे। पाइपले पिट्दै खेदे। त्यसैबीच स्थानीय औषधि पसलका सञ्चालक दिलीपले हुत्तिँदै आएर टाउकामा मुक्काले हानेपछि भीमबहादुर ढले। उनलाई अस्पताल पुर्‍याउँदा त्यहाँका चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए,’ स्थानीय दलित अगुवा रणेन्द्र बरालीले भने। प्रहरीले भने यो घटना दलित र गैरदलितबीचको झगडाले भएको भन्ने कुनै प्रमाण नभेटिएको बताएको छ।
डिएसपी थापाका अनुसार बिहीबार बिहान भीमबहादुर मादकपदार्थ सेवन गरेर मन्दिर पुगेका थिए। ‘प्रत्यक्षदर्शीले दिएको बयानअनुसार उनले नसाको तालमा मन्दिरमा दुई लात्ता हानेछन्। अनि नजिकै रहेका मान्छेलाई अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गरेछन्,’ थापाले भने, ‘आफूलाई गाली गरेपछि त्यहाँ रहेका युवाले कुटेको देखिएको छ।’
सीतारामले बिजुलीको तार राख्न प्रयोग हुने पाइपले भीमबहादुरलाई कुटेको र त्यसपछि भागेर केही पर पुगेका उनलाई मेडिकल सञ्चालक दिलीपले टाउकोमा हानेको डिएसपी थापाले बताए। ‘पोस्टमार्टममा पाइपले पिटेको डाम त देखिँदैन तर टाउको पछाडि चोट देखिन्छ,’ थापाले भने। प्रहरीले त्यस दिन भीमबहादुर रक्सी खाएर ‘हल्लिँदै हिँडेको’ भिडिओ फेला पारेको छ।
‘हामी स्थानीयबासीहरूको पनि बयान लिँदैछौं। अनुसन्धान सकिएपछि वास्तविक कुरा पत्ता लाग्ला,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको अनुसन्धानले मन्दिरको विषयमा झगडा भएको हो वा घटना दलित/गैरदलितका विषयमा भएको हो भन्ने पुष्टि गर्दैन। घटना पूर्वयोजनामा भएको हो वा कुनै मनसायले भएको हो भन्ने पनि केही देखिँदैन।’ मृतककी श्रीमती विन्दु विकले पनि आफूहरूले मन्दिरमा बोकाको बलि दिने विषय कहिल्यै नउठाएको बताइन्।
‘मन्दिरमा हामीले पूजा गर्न छाडेको १५-१६ वर्ष भइसक्यो। अचेल हामीले यस विषयमा कुरा गरेकै छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘रक्सी पिएको बेला अलि बढी बोल्ने उहाँको बानी थियो। बोल्नुभयो होला। तर गाली गर्दैमा मर्ने गरी कुट्नुपर्थ्यो र?’ उनले विगतमा मन्दिर बाहिरैबाट फूलपाती र दक्षिणा दिएर पूजा गर्ने गरेको भए पनि भित्र छिर्न नदिएपछि वर्षौंदेखि पूजा गर्न छाडेको बताइन्।
दलित अगुवा बरालीले कतिपयले यसलाई दलित/गैरदलितबीच भएको घटना होइन भन्ने तरिकाले कुरा गरेको बताउँदै भने, ‘विषय जेसुकै भए पनि उनीमाथि कुटपिट हुनुको पछाडि दलित भनेर हेला गरिनु, दलितले गाली गर्‍यो भनेर अपमानित महशुस गर्नु लगायत कारण लुकेका छन्।’
उनले अगाडि भने, ‘प्रत्यक्षदर्शीसँग हामीले बुझेअनुसार बोका बलि दिन पाउनुपर्ने कुरा उठाएपछि नै भीमबहादुरमाथि कुटपिट भएको हो। उनले मादकपदार्थ सेवन गरेर होहल्ला गरेको भए सम्झाउनुपर्थ्यो, परिवार बोलाएर जिम्मा लगाउनुपर्थ्यो। ज्यानै जाने गरी कुटपिट गर्नु अपराध हो।’
भीमबहादुरका छोरा किसनले दलित र गरिब भएकै कारण आफ्नो बाबुमाथि कुटपिट भएको दाबी गरे। ‘बुबालाई अरू कुनै रोग थिएन। राम्रैसँग काम गर्दै आउनुभएको थियो। तर त्यस दिन बिहान उठेर जानुभएको बुबा फर्केर आउनुभएन,’ उनले भने, ‘अस्पताल पुग्दा बुबाको मृत्यु भइसकेको रहेछ।’
विगतमा पनि दलितलाई उक्त मन्दिर प्रवेश गर्न नदिइएको उनले बताए। त्यो कुरालाई लिएर बाबुले बेला-बेला गुनासो पोख्ने गरेक‍ो उनले सम्झे। ‘यसरी खुलेआम दलित कुटिँदा मौन बस्यो भने यस्तो घटना भइरहन्छ। दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ किसनले भने, ‘हाम्रो परिवारले मात्र नभई सारा दलितले न्याय पाउनुपर्छ।’